Fanazavana ny rano anaty rano: ny tsara indrindra misy rano madio mangarahara | Ny trondro
Ny mpanazava rano anaty rano dia manampy betsaka hitazona ny rano hadio ary raha tsy misy izany fahatsapana rahona izany izay olana mahatsiravina sy fahasalamana be loatra dia mety hiteraka trondro. Haingana sy mora ampiasaina ireo vokatra ireo, na dia manana eritreritra maromaro aza izy ireo.
Noho izany, Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny inona ny mpanazava rano anaty rano aho, ankoatra ny milaza aminao ny fomba fiasan'izy io, ny fomba fampiasana azy na ny faharetan'ny fotoana iasana, miampy fikafika vitsivitsy hitazonana ny rano madio. Araka ny fantatrao, ny rano dia singa manandanja amin'ny aquariums, koa mamporisika anao izahay hamaky ireto lahatsoratra hafa ireto conditioner rano aquarium o rano inona no hampiasaina ao amin'ny aquarium.
1 Inona ny mpanazava rano anaty rano
2 Ahoana ny fiasan'ny mpanazava
3 Fomba fampiasana ny mpanazava
4 Maharitra hafiriana vao misy vokany
5 Toromarika mividy
5.1 Karazana Aquarium
5.2 Ilaina (manana sy Aquarium)
6 Ahoana ny fomba hananana rano mangatsiaka kristaly ao anaty aquarium? fitaka
7 Azoko atao ve ny mampiasa ny mpanazava amin'ny rano ao anaty aquarium misy fano?
8 Ny syndrome vaovao an'ny aquarium
9 Aiza no hividianana mpanazava rano aquarium mora vidy
Inona ny mpanazava rano anaty rano
JBL Clearol - Fitsaboana ...
Ny mpanazava rano anaty rano dia ranoka ahafahanao manafoana ny fahatsapana loto ao anaty rano ao amin'ny aquarium anao dia manala ireo sombin-javatra misy ao anaty rano ary izany no mahatonga an'io "rahona" io. Ireo sombin-javatra ireo dia afaka miditra anaty rano amin'ny antony maro samihafa, ohatra:
La misotro be loatra, izay mety hiteraka sakafo tsy mihinana hihitsoka ao anaty rano ny hazandranonao (amin'ity tranga ity dia ho toy ny mangatsiaka ny vera).
El vovoka izay mamela ny vatokely.
ny ahidrano (Mety ho io no olana raha mikitika maitso ny akondro). Ireo dia afaka manomboka mitombo amin'ny antony maro samihafa, toy ny hazavana be loatra na otrikaina be loatra.
Ny fisian'ny mineraly levona anaty rano, toy ny phosphate na vy, izay hahatonga ny rano hiseho volondavenona na volontany.
Any ravaka izay mandoko tsikelikely.
Angamba na io fahatsapana ho maloto io dia vokatry ny a rafitra filtration miaraka amin'ny olana (amin'ireny tranga ireny, mazava ho azy, tsy maintsy manadio ny rano ianao ary manamboatra ny rafitra sivana).
Ahoana ny fiasan'ny mpanazava
Raha toa tsy mazava ny rano ao anaty aquarium anao dia tsy maintsy mandray fepetra ianao hanadiovana azy tsy noho ny antony mahafinaritra fotsiny.fa satria mety hampidi-doza ny trondroo. Noho izany, ny iray amin'ireo dingana voalohany dia ny fampiasana mpahazo rano.
Tsotra ihany ny fandidiana, satria izay ataon'ity ranoka ity dia miteraka fihetsika simika izay manangona ireo poti-javatra mahatonga ny rano ho maloto mandra-pahatonga azy ireo ho lehibe hijanona eo ambanin'ny aquarium na ho voafandriky ny sivana. Ny fomba, araka izay azo atao, dia haingana, satria ora vitsivitsy monja no manadio ny rano.
Fomba fampiasana ny mpanazava
Mampahatsiahy anao izany izahay tokony hanaraka hatrany ny torolàlana momba ny vokatra ianao mba hisorohana ny tahotra ary hahazoana ny vokatra tsara indrindra. Ny marika tsirairay dia samy manana ny fatra fanaony, na dia miasa amin'ny fomba mitovy aza izy rehetra:
Hamarino tsara fa algama sy zavamaniry no tsaboina ary ny vokatra hampiasanao dia azo antoka ho azy ireo. Raha hikarakara azy ireo ianao dia miandrasa 24 ora alohan'ny hampiasana ny fanazavana.
Amboary ny PH ny rano amin'ny 7,5.
Mifikitra amin'ny fatran'ny vokatra isaky ny litatra ny rano voalaza (mamela anao hampiasa ny satroka metatra ny ankamaroany ary hikajiana ny litatra rano sy ny hamafin'ity noho ny fatra). Raha mandeha mihoatra ny ranomasina ianao dia mety handratra na hamono ireo trondro ary handoto ny rano mihitsy aza.
Araraka tsara ny vokatra anaty rano.
Avelao handeha ny sivana mandra-pahatongan'ny rano madio.
Ny vokatra sasany dia mamela anao hamerina ny fatra mandra-pahadio tanteraka ny rano, na izany aza tsy maintsy ho azonao antoka fa 48 ora no lasa eo anelanelan'ny fatra.
Maharitra hafiriana vao misy vokany
Mazava ho azy fa haingana dia haingana ny mpanazava rano, na dia miankina amin'ny vokatra aza izany. Matetika, a 72 ora salan'isa (izany hoe telo andro) hahazoana rano madio sy madio.
Ny mpanazava rano dia a karazana vokatra somary voafaritra tsara, fa izy ireo koa dia manana famaritana marobe izay tsy maintsy raisinao rehefa mividy azy, satria misy modely maro. Arak'izany dia tsara ny mieritreritra an'ity manaraka ity:
Ny mpanazava sasany dia tsy mety afa-tsy amin'ny aquarium rano velona, raha ny hafa kosa kendrena manokana amin'ny aquarium aquarium nambolena na sira. Toy izany koa, ny sasany dia tsy miasa amin'ny rano tsy voasivana, satria izy ireo dia manangona ny poti-maso mba hamandrihana azy ireo amin'ny sivana. Noho izany, ny fiheverana ny karazan-dranomasina misy antsika dia zava-dehibe mba tsy hikorontana sy hampidirana ny hazandranontsika.
Raha ny marina, misy karazany maro ny mpanazava izay mety ho hitantsika mikendry ny dobo aza, isaky ny vanim-potoana ...
Ilaina (manana sy Aquarium)
Toy izany koa, tsy maintsy mijery sy mieritreritra izay ilaintsika isika ary, mazava ho azy, ireo an'ny aquarium. Azontsika atao ny misafidy vokatra iray izay manolo-tena hanazava ny rano na ho an'ny zavatra feno kokoa, satria misy ny sasany manome safidy maro hafa, toy ny fanitsiana ny haavon'ny otrikaina na oksizena, izay mety tsara raha mila fanampiana fanampiny.
Ary koa, misy ny mpanazava izay haingana kokoa noho ny hafa, zavatra tsy tokony ho adino raha toa ka hampiasainao indray mandeha, amin'ny vonjy maika na indraindray mba hitazomana ny rano hadio.
Toy izany koa, hisy fiatraikany amin'ny zavatra tadiavintsika ny vidiny. Ny mpanazava tsotra dia mora kokoa, raha ireo manana fanampiny hafa kosa manana vidiny lafo kokoa. Ny hevitra tsara dia mety ny manisa izay mora vidy kokoa ho antsika alohan'ny hividianana zavatra.
Ahoana ny fomba hananana rano mangatsiaka kristaly ao anaty aquarium? fitaka
Ny fitazonana ny rano ao anaty aquarium ho madio sy madio tsy dia sarotra loatra, na dia mitaky andian-dahatsoratra aza asa miverimberina izay tsy maintsy ataonao matetika, fa izany dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fiainan'ny hazandranoo. Ohatra:
Fahano fotsiny izy ireo hisorohana ny sakafo tsy hianjera ao anaty rano ary hahatonga azy io ho maloto.
Clean miaraka amina harato ny sisan-javatra izay mitsingevana ao anaty rano indraindray.
Sasao ny vatokely isaky ny matetika ka tsy mamoaka vovoka.
Tazomy ny trondro ampy- Aza manana be loatra sao ho maloto haingana kokoa ny aquarium.
Tazomy ny Aquarium madio.
Mandehana manao miova tsy tapaka ny rano (miaraka amin'ny fanovana 10 ka hatramin'ny 15% ny rano isan-kerinandro, ohatra).
Hamarino tsara fa miasa tsara ny rafitra sivana ary diovy izany raha ilaina.
Azoko atao ve ny mampiasa ny mpanazava amin'ny rano ao anaty aquarium misy fano?
Tsia, aza mampiasa ny mpanazava ao anaty aquarium misy fano. Ireo vokatra ireo dia natao ho an'ny trondro ihany, izay mety hanimba karazana hafa.
Ny syndrome vaovao an'ny aquarium
Raha toa ka nametraka aquarium vaovao ianao, Mety tsy mazava ny rano ary mieritreritra ianao fa maloto. Saingy, amin'ireto tranga ireto dia aleony manova ny toe-java-misy iainany. Toa tsy mazava ny rano noho ny zavamiaina bitika mikraoskaopy, toy ny bakteria, izay avy amin'ny toerana toy ny fiompy trondro, sakafo na zavamaniry. Mazava ho azy fa rehefa milamina ny bakteria dia manjary mangatsiaka indray ny rano. Noho izany, raha manana aquarium vaovao ianao dia tsara ny miandry herinandro alohan'ny hanampiana ireo zavatra simika toy ny mpanazava rano.
Aiza no hividianana mpanazava rano aquarium mora vidy
Mpanazava rano anaty rano tsara tsy dia sarotra tadiavina, na dia miankina amin'ny alehantsika aza indraindray dia hahita maodely maromaro na vitsy, ohatra:
En AmazonTsy isalasalana fa eo no hahitantsika ireo maodely isan-karazany lehibe indrindra, ka raha mila zavatra manokana manokana isika, na marika manokana dia io no toerana mety indrindra hijerena voalohany. Ho fanampin'izay, manana ny kely amin'ny zavatra rehetra izy ireo, ao anatin'izany ny marika tsara indrindra na malaza, toa ny Tetra, JBL, Flubal, Seachem ...
En fivarotana biby fiompy Tahaka an'i Kiwoko sy Zooplus dia tsy hahita karazany marobe ianao, na dia tena mety aza izy ireo raha toa ka fantatrao hoe inona no hotadiavinao na mila fanampiana ianao, izay ny zavatra tsara indrindra dia ny mitsidika ny fivarotana ara-batana ataon'izy ireo. , izay ahitanao fanampiana matihanina. Ho fanampin'izany, ny tranonkala dia mirona hanana programa tsy fivadihana sy tolotra mahaliana izay afaka mamonjy anao amin'ny farany.
Raha ao fivarotana lehibe DIY toy ny Leroy Merlin, izay misy faritra kely ho an'ny biby fiompy, dia tsy hahita mpanazava betsaka noho ireo mikendry dobo filomanosana na dobo izay tsy misy zavamananaina mipetraka.
Manantena izahay fa nanampy anao hahatakatra ny fiasan'ny mpanazava rano anaty rano, vokatra tena ilaina ary ampiasaina amin'ny fomba manokana sy hitazomana ny rano hadio. ny aquarium antsika ary, noho izany, fa tsara tarehy sy mahafinaritra kokoa ho an'ny hazandranontsika izy. Lazao aminay, efa nampiasa fanazavana? Nanao ahoana ny zavatra niainanao? Mamporisika anay marika manokana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » Fanazavana rano anaty rano